Mandosira, iray amin'ireo lalao mampiankin-doha amin'ny Android | Androidsis
Mandosira, iray amin'ireo lalao mampiankin-doha ho an'ny Android izay tsy azonao adino amin'ny terminal anao
Miverina izahay miaraka amin'ny fizarana Lalao mampiankin-doha amin'ny Android na ireo lalao mahazatra izay tsy ho azonao adino amin'ny terminal Android anao tena ilaina amin'ireo fotoam-pifaneraserana akaiky sy fialan-tsasatra ao amin'ny efitrano fidiovana, ary na dia mety ho toa lainga na zavatra tsy mahalala fomba aza izany, ny efitra fandroana no toerana ampiasainay ny terminal Android anay indrindra indrindra ny filalaovana an'ireto lalao ireto amin'ny toetra tsotra na mora filalaovana.
Amin'ity fotoana ity dia te hampahafantatra sy hanoro hevitra a lalao android maimaim-poana antsoina hoe Escape, izay, ankoatry ny fanaovana dokambarotra tafiditra ao aminy, dia misy ihany koa ny safidin'ny fividianana fampiharana, koa alohan'ny hametrahana izany amin'ireo ankizy kely ao an-trano dia aza hadino ny manana safidy tenimiafina ho an'ny fividianana azo atao avy amin'ny fikirana Play Store.
1 Inona no atolotry ny Escape, iray amin'ireo lalao mampiankin-doha amin'ny Android?
2 Ahitana lalao tsy azo atao koa ny mandositra
3 Sintomy ny Escape maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Inona no atolotry ny Escape, iray amin'ireo lalao mampiankin-doha amin'ny Android?
Escape Amin'ny ankapobeny dia momba ny, amin'ny alàlan'ny fanamoriana fiaramanidina na balafomanga, ny fiezahana handositra ny tontolo iray simba eo ambanin'ny tongotsika sy ambonin'ny lohantsika raha miezaka mamonjy olona betsaka araka izay tratra izy. Lalao izay manasongadina sary efa tena nahomby sy niasa izay, miaraka amina mozika mahafinaritra, dia handentika antsika ao amin'ilay traikefa nahafinaritra manavotra ny isan'ny olona betsaka indrindra amin'ny tontolo rava manandrana misoroka ny vato misakana rehetra izay haseho antsika amin'ny sidina mafy ataontsika.
Tsy ho tsotra kokoa ny rafitry ny lalao ary tsotra fotsiny a Lalao mikasika izay, amin'ny alàlan'ny paompy an-tsokosoko eo amin'ny efijery an'ny Android, dia mila manandrana mitazona ny balafomanga isika amin'ny fisorohana ireo sakana rehetra atolotra antsika amin'ny fotoana iray izay hanandramantsika hamonjy ny isan'ny sisa velona indrindra izay hitantsika amin'ny fitsoahan-tsika adala. Mba hanomezana anao ny hevitra dia a rafitra lalao toy ny Flappy Bird malaza miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe fa amin'ity sary ity, ny tantara sy ny mozika dia miasa bebe kokoa.
Ahitana lalao tsy azo atao koa ny mandositra
Raha fantatrao kely momba ny rafitry ny lalao izay hitantsika amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny lalao, rehefa mankany amin'ny efijery fanombohana ny lalao isika dia ho afaka hahita ny fomba haseho amintsika ambaratonga vaovao iray izay amin'ny anaran'ny Fanamby isan'andro Homena antsika ny fahafaha-manao fanamby vaovao, a lalao tsy azo atao milalao noho ny haavon'ny zava-tsarotra. Iray amin'ireo lalao tsy mety amin'ny olona mora sosotra.
Sintomy ny Escape maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mandosira, iray amin'ireo lalao mampiankin-doha ho an'ny Android izay tsy azonao adino amin'ny terminal anao
XWatch, Android Wear an'i Bluboo, amin'ny sary tena izy
Ahoana ny fomba hamoronana fantsona vaovao amin'ny Telegram, ary hiditra ao @Androidsis